i-RealWW, uMbhali kwi-Real Estate Blog
Archives Umbhali: okwenyaniWW
ezaposwa ngomhla Februwari 6, 2020 by UDan Hamilton
Gqi beliswa: I-Feb 6, 2020 21: 29
Iindidi zokufudumeza okwethutyana: Yeyiphi eyona ndawo ilungileyo yokwakha iindawo?
Zininzi iindlela ezahlukeneyo zokugcina ubushushu bexeshana ezikhoyo kwindawo yakho yokwakha, kuxhomekeke kuwe Ukupholisa ngaphandle iimfuno. Nokuba ukhetha i ngqo, ngokungathanga ngqo, or i-heater yethutyana yombaneUhlobo ngalunye lunezibonelelo ezahlukeneyo kunye nokusetyenziswa.
Ngoba Shayi You Use a TOkwexeshana Huyadla?
UkuphumaIcala iheather yethutyana Yokuqeshisa inokugcina ishishini lakho liqhuba kwaye nabasebenzi bakho bakhuselekile kumaqondo obushushu ebusika anqabileyo. Zimbini izinto ezibalulekileyo ekufuneka uzigcine engqondweni. Okokuqala, yheater yethu yokwakha kufuneka inikezele ngolawulo oluthembekileyo lobushushu kunye nokusasazwa kobushushu kwindawo enkulu yangaphandle. Okwesibini, yuyafuna ukuqinisekisa ukuba isifudumezi sixhomekeke kwi Ukunikezelwa komoya omtsha. lo ukusika emva on Ikhabhon monokside kunye nezinto ezingcolisayo ezinomoya inokwakha kunye nabashushu abaxhomekeke on ukujikeleza komoya ngaphakathi
Ziziphi Dukuba ukhetha Bphakathi Dndilungile, Indilungile, kwaye Electric Cukwakhiwa Habatya?
Izitshisi zexeshana zinokusebenzisa iintlobo ezahlukeneyo zefutha. Kubalulekile ukuqonda izibonelelo ezahlukeneyo kunye nokusetyenziswa kohlobo ngalunye. Nazi iintlobo ezintathu eziqhelekileyo eziqhelekileyo ze-heater yangaphandles.
Ngqo ishushus zezona zidume kakhulu. Nheater yomoyaS zihlala zilukhetho olufanelekileyo kuba ukubakho kombane kuhlala kuhlala kungabizi kakhulu. Pirhasi ye-ropane Izixhobo zokufudumeza ziyaguquguquka kwiimeko zeselula, ukufudumeza ukuya kuthi ga kwi-500,000 yeenyawo cubic. Utywala Izitshisi zokwakha i-propane zingazitshisa iindawo ezinobude obuzi-2.5 zeemitha ububanzi Ukugcina kwiindleko, khetha i-heater leyo ayifuni vaporizer.
Ngqo ishushuUkusetyenziswa isitya okanye eshushu eselwayor ukuba ukunciphisa iindleko zeoyile ngelixa ukugcina amandla okushisa izithuba ezikhulu.
A i-heater yokwakha yombane ephathekayo lolunye ukhetho olungaxhomekeki kwirhasi okanye kwipropane.
Njengenkokheli yemizi-mveliso, sisebenza ngokukhethekileyo kwirente eqhelekileyo yokuqesha i-heater kwindawo yakho yokwakha. Ukuze ufunde ngakumbi malunga nezisombululo zethu zokufudumeza okwethutyana,Nxibelelana nathi ngoku kwisicatshulwa esenziwe umntu.
exhonyiweyo Ukuphucula iKhaya | ephawulweyo Ukuqeshisa okwethutyana | Ushiye uluvo |
ezaposwa ngomhla Februwari 6, 2020 by NguLuka Hancock
Gqi beliswa: I-Feb 6, 2020 08: 48
Izinto ezi-5 ekufuneka ziqwalaselwe xa urenta i-Dumpster (ukuze ungapheli njengalo mfo)
Xa sisenza izinto okokuqala, siyaphuphuma, siphulukane namazwi kuba asazi ukuba sithini kwaye izinto zihlala zididekile kwaye zingalungelelani. Njengaseku-odoleni kwivenkile yokutyela entsha ... Ngaba uyazi ngokwenene into oyifunayo? Ngaba uyazi kakuhle ukuba ungabiza njani eso sitya? Uqinisekile ukuba uza kuyithanda?
Sifuna ukuqinisekisa ukuba ixesha lakho lokuqala xa uqasha i-dumpster ayizukufana noku-oda kwindawo yokutyela entsha. Sifuna ukuqinisekisa ukuba uyazi ukuba ufuna ntoni, mandithini kwaye ngaphezulu kwako konke, sifuna ukuba uthando yona. Ke, siqulunqe uluhlu lwezinto ekufuneka uziqwalasele xa uceba ukuqasha i-dumpster ngoko ke ixesha lakho lokuqala liyamangalisa.
Yintoni oyifaka kwiDumpster
Sifuna ukuba uyazi ukuba ayizizo zonke izinto ezinokuhamba ngaphakathi dumpster. Uvunyelwe i-toni (ngokoqobo, itoni) yezinto ezilapho, ezinjenge-shingles, iithayile kunye nokuma komhlaba. Kodwa kukho izinto ezithintelweyo ezingenakusiwa kwindawo yokugcwalisa umhlaba kwaye sinesisombululo sokuba ulahle ezi zinto ngokufanelekileyo.
Qiniseka ukuba ucebisa umboneleli wakho malunga nento oyifaka kwi-dumpster yakho kwaye baya kuba nakho ukukufumanela idumpster efanelekileyo nakweyiphi na iprojekthi.
Apho ubeka iDumpster
Xa uqasha i-dumpster, into ekufuneka uyiqwalasele kukuba umhlaba uqinile ngokwaneleyo ukubamba ubunzima be-dumpster. Awufuni dumpster ukutyhala nakweyiphi na indawo ethambileyo kwaye ushiye uphawu kwi-lawn yakho entle eyenziwe ngezandla.
Enye into ekufuneka uyiqwalasele kukuba ubeka ngokwakho kwipropathi yakho hayi eyommelwane wakho okanye ipropathi yesixeko.
Indawo esikucebisa ukuba ushiye idumpster yeyakho indlela yokuqhuba. Yipropathi yakho, ikhonkrithi eqinileyo kwaye yindawo efanelekileyo ekude kakhulu ukuba ingabikho kude nendlu ukulahla inkunkuma yakho. Ukuba unexhala malunga nokonakalisa impahla, qiniseka ukuba ufumana inkampani ethi ikhathalele ipropathi yakho okanye ibonelele ngokhuseleko oluthile kwipropathi yakho.
Uya kuyifuna nini i-Dumpster kwaye uza kuyifuna ixesha elingakanani?
Ewe, oku kuxhomekeke ekubeni iprojekthi yakho iqala nini kwaye iprojekthi yakho iza kuthatha ixesha elingakanani. Ukuba uqala iprojekthi yakho ngomso, ke uyakufuna idumpster yakho ngomso kwaye uninzi lweenkampani eziqeshisayo zokulahla inkunkuma unokuzifumana ngomso. Fowunela inkampani yakho yokulahla inkunkuma kwindawo yakho.
Ngokwexesha oya kulifuna ngalo, ukuba iprojekthi yakho iza kuthatha iveki, ke uya kuyidinga le dumpster iveki. Ithuba eliqhelekileyo lokuqesha i-dumpster ziintsuku ezingama-5-7 kodwa abanye abantu bayifuna kuphela ngemini enye, kwaye abanye abantu bayayifuna iiveki ezi-3. Kuxhomekeke ngokwenene kwixesha leprojekthi yakho. Uninzi ukuqesha indawo yokulahla inkunkuma iinkampani zibandakanya iintsuku ezimbalwa kumgangatho wazo.
Uza Kanjani ukuze Uhlukane neDumpster
Ngethamsanqa kuwe, awukho kule wedwa. Uninzi lweenkampani eziqeshisa indawo yokulahla inkunkuma zibandakanya ukukhetha kunye nokuhambisa kwinqanaba lokuqasha. Ukuze ususe i-dumpster kwindlela yakho yokuhamba, yonke into ekufuneka uyenzile kukuthatha ifowuni kwaye uthi, "Heyi, ungayithatha le dumpster?" nakwiiyure ezingama-24, ihambile!
Uya kubhatala nabani?
Ngalo lonke uphando olwenzileyo, sinethemba lokuba ukhetha inkampani eqeshisayo yeyona ilungileyo. Siyathemba ukuba ukhetha inkampani eqeshisayo ukuba ayikhathaleli kuphela idumpster kodwa ikukhathalele, umthengi, ngokunjalo. Qiniseka ukuba ukhetha inkampani yokuqasha indawo yokulahla inkunkuma kuba inokukhetha nawe!
exhonyiweyo Ukuphucula iKhaya | ephawulweyo Ukuqasha iDumpster, Ukuqesha i-Dumpster, ukukhupha inkunkuma | Ushiye uluvo |
ezaposwa ngomhla January 17, 2020 by okwenyaniWW
Gqi beliswa: UJan 17, 2020 17: 02
Iimpawu ezi-5 eziBalulekileyo zeNdawo yeofisi eQeshisiweyo
Ukufumana indawo yeofisi efanelekileyo kwiimfuno zakho njengosomashishini okanye umnini shishini elincinci kunokuba ngumceli mngeni. Noko ke, kukho izinto ezithile kufuneka ukhangele ukuba xa sifuna. Ukuba awukaze ufumanise ukuba kufanelekile ukuzingela indawo yeofisi egqibeleleyo ukuba uyiqeshise, Nazi izikhombisi kwiimpawu ezibalulekileyo ekufuneka uziqaphele.
Ifoto yasimahla yasebukhosini
1. Ulawulo lwePropathi yeyona nto iphambili
Enye yezinto ezibaluleke kakhulu xa uphendla isithuba see-ofisi iya kuba ukuba ulawulo lwepropati on-site okanye ubuncinane, on-call. Oku kubaluleke ngakumbi kwiindawo ezixakekileyo okanye abambalwa kakhulu kweli lizwe, kuba oko kunokuba nzima kakhulu ukufumana inkampani inkonzo ukuba aphendule ngokukhawuleza xa umba kufuneka kuvela. Umzekelo, imibhobho kwi yangasese eyeka phezulu okanye izibane, kuvuthelwa eholweni. Kubalulekile ukusebenza nayo Ulawulo lwePropathi eNew Jersey, umzekelo, ngenxa yokuba baya kuba kwinkonzo yasendlwini ngomnxeba okanye iinkampani zekhontrakthi ukuba zikumnxeba 24/7. Ungaze aqeshise isithuba ofisi ngaphandle kungqinisiswa iqela yolawulo lwepropati.
Elinye lamagatya ongafuna ukuba nawo kumqeshiso wakho kukukwazi ukushenxisa okanye ukwandisa indawo njengoko kufuneka. Njengokuba inkampani yakho ikhula, kanjalo kuya kubakho imfuneko yesithuba sakho seofisi, ngoko ke zama ukungabambeki kwindawo yokuqeshisa apho ungayi kuba nako ukuya kwiziko elikhulu okanye uthathe indawo engaphezulu kumgangatho olwabelweyo.
3. Izixhobo ezibandakanyiweyo kuqeshiso
Xa uqeshisa ngendawo e-ofisini kwisakhiwo esikhulu, kuyanceda ukuba nendawo eyamkela abantu ekungeneni kwesona sikhokelo sikhokele iindwendwe kunye nabaxumi kwindawo yakho yeofisi. Nangona oku kuyimfuneko, kwenza uncedo kwizakhiwo ezinkulu. Abaxhasi lula ningawufumana-ofisi yakho, kokukhona ulitshitshisile baya kuba phezu efika.
4. Inqanaba lokhuseleko
Ukhuseleko ngumba omkhulu ngaphandle kokufumana iofisi yakho. Ukhuseleko kwisiza kunceda ekuqinisekiseni ukuba iofisi yakho nayo yonke into ekuyo ikhuselekile ngamanye amaxesha ungekho kwisiza. Amanye amashishini amancinci agcina iofisi kodwa uninzi lomsebenzi wawo wenziwa endleleni. Ukuba kunjalo, ukhuseleko esizeni luqinisekisa ukuba indawo ikhuselekile ekungeneleleni.
5. Ukufikelela ngokulula
Elinye icandelo eliphambili onokujonga kulo ukufikelela lula. Nezakhiwo ezinemigangatho emibini ziyaxhamla kwizinyusi kuba abanye abathengi okanye abasebenzi banokuba sengozini yomzimba. Lula ukufikeleleka ukusuka kwakunye nokwakha njengoko emgangathweni apho wena ibekwe kubaluleke kakhulu.
Ngamanye amaxesha ukupaka okufumanekayo yinto ephambili, kodwa ngaphakathi izixeko ezikhulu apho abantu abaninzi sendleleni rapid, oku kuba umba. Nangona kunjalo, into enye ekufuneka ujonge kuyo lulawulo lwepropathi ukuqinisekisa ukuba nawuphi na umcimbi ofuna ukujongana nawo uza kujongana nawo ngokukhawuleza. Ukuqeshisa ngendawo yeofisi kunokuba ngumceli mngeni kodwa ukusebenza neqela lolawulo lwepropathi kunokukunceda ufumane iofisi efanelekileyo kwiimfuno zakho.
exhonyiweyo Ishishini lokuthengisa izindlu | ephawulweyo Indawo yeOfisi | Ushiye uluvo |
ezaposwa ngomhla Disemba 20, 2019 by okwenyaniWW
Gqi beliswa: I-Dec 20, 2019 08: 49
Izikhokelo eziMfutshane malunga notyalo mali kwiPropathi
Utyalomali kwipropathi lungabonisa ukuba ishishini elinengeniso kakhulu ukuba lenziwe ngokufanelekileyo. Utyalomali kwipropati lubandakanya ukuthenga ipropathi ngaphandle kokucwangciswa okanye ukutyala imali kuyo. Ukuthenga kuthembisa ngenkuthazo kwaye uyithengise ngaphandle okanye uyiqeshise ukuze ufumane imbuyekezo ephezulu. Utyalomali kwipropathi yinkqubo entsonkothileyo kwaye akukho bukhulu bungalingani konke konke. Ke, kuya kufuneka ubambe ukuqonda okuyinyani kwintengiso yearhente yokuthengisa. Nazi ezinye iingcebiso eziya kukunceda ekuphuculeni utyalomali lwakho lwepropathi. Ke, funda le ngcebiso zilandelayo malunga notyalo mali ukuze wandise umbono wakho.
Yenza uphando olupheleleyo lwendawo: Phambi kokuba utyalomali kuyo nayiphi na impahla uqiniseke ngekamva lakho kwaye ubeke ibango lokuhlala kule ndawo. Xa ufikelela kwindawo elandelayo iindidi ziya kusebenza kakuhle ngoko khetha ezizezona zininzi zibalulekileyo. Ukukhula kwezokhenketho, iivenkile, Amakhonkco ezothutho, iZikolo, uTyalo-mali, imisebenzi.
Ngaphambi kokuba uthenge nayiphi na ipropathi, qiniseka ukuba kufanelekile ixesha lakho namandla kunye neendleko. Bala iindleko zokubuya zonke kwaye uqiniseke ukuba ukongeza kutyalo-mali lwakho kuhlawula ixesha namandla akho.
Ungaqwalasela amagumbi ehotele kunye nolondolozo lweholide zotyalo-mali lwexeshana elincinci. Olu tyalo-mali luphindaphinda ukuthenga-ukuvumela izinto, kunye nexesha elifutshane labaqeshi zixanduva lwehotele ekufuneka uzenzile kukutyala kwaye ulinde ixesha lokuhlawula.
Ungaze uchithe imali yakho kwi-exorbitant Ingcebiso ngotyalo mali iikhosi. Ke, hlala kude kwezo zifundo ziphakamileyo zamaxabiso athetha iimfihlo zepropathi kuba akukho zimfihlo, unokufunda yonke into kukhangelo olulula lukaGoogle.
Ungahambi wedwa kutyalo mali lwepropati oluya kuthi lwenze inkqubo elula kunoko kufuneka ukhethe iqela elibandakanya umrhwebi wemali mboleko, i-solicitor, umthombo (inkampani okanye umntu), umcebisi (oku kunokuba semthethweni okanye ngokungekho semthethweni) kwaye kulungiswe umntu okanye umakhi. Kwakhona, cela ukudluliselwa ekukhetheni amaqela alandelayo.
Kuya kufuneka uqhubeke ukukhangela ezinye iindlela nokuba sele wamkelile. Ewe, ayithathi xesha lininzi ukuba impahla iwele kanjalo; Kuya kufuneka ukhethe okwesibini.
Kuya kufuneka uye kumbono wearhente yokuvumela kutyalo-mali lwakho.
Sukuzinqanda kwimimandla yendawo ngenxa yokuba ungaphulukana nolona tyalo mali luphambili.
Kutyalo mali lwepropathi Gcina i-mantra ephindwe kabini yeendleko kunye nexesha eliphindiweyo engqondweni, njengoko ziya kukunceda ukujongana nazo naziphi na iingxaki zequbuliso obungakhange uziqwalasele ngaphambili.
Musa ukungxama ukuya kwipropathi enkulu yesivuno njengoko unikezo lunokubonakala lungonwabisi kuwe ngelixa indleko zidluliselwa kwiakhawunti yakho. Ke ngoko, enye ingcebiso ngotyalo-mali kwipropathi endinokukunika yona kukuba ungaze ulalanise kwiziseko zakho zezivuno eziphezulu.
Sebenzisa iakhawunti eyahlukeneyo yebhanki kutyalo mali oluzakuthintela zonke iingxaki.
Rhoqo ngonyaka kuya kufuneka uphinde uvavanye utyalomali lwepropathi oluya kukunceda uqonde apho ume khona.
Into yokugqibela, ekufuneka uyenze ukusuka ekuqaleni, ukucwangcisa ukuphuma kwakho. Kuya kufuneka ube nesicwangciso esipheleleyo esivumayo ukuba uphume.
exhonyiweyo Ukuthengisa ngokuthengisa izindlu nomhlaba | Ushiye uluvo |
ezaposwa ngomhla Novemba 27, 2019 by okwenyaniWW
Gqi beliswa: I-Nov 27, 2019 15: 20
Yonke into enxulumene nokuqhekeza kunye nemiphumo yoko kwetyala
Xa umntu engena endlwini yomnye okanye ipropathi ngaphandle kwemvume ngenjongo yolwaphulo-mthetho, loo nto iya kuba lilungelo lokuqhekeza okanye ukophula umthetho e-Dayton, eOhio. Ummangalelwa kuya kufuneka achithe iminyaka embalwa emva kwemida yolwaphulo-mthetho olwenziwe okokuqala. Kwaye, kufuneka ajongane nemiceli mngeni emininzi emva koku ubomi bakhe bonke. Kungenxa yoko le nto kubalulekile ukuba uzikhusele koku zityholo kunye nokunciphisa umngcipheko onokuthi uchaphazele umgangatho wobomi bakho. Ngenxa yoko, wena, nangona kunjalo, kufuneka ukhululwe ejele ngebheyile. Nje ukuba uyithumele, ungaphuma ejele ulungiselele ukuzithethelela.
Ukuba awukwazi ukucwangcisa isixa sebheyile, ke jonga ukunxibelelana naye Iibhondi zeNqaba yeBhola- Dayton ukufumana uncedo. Banokukhokela kule micimbi.
Ushwankathelo lweentlawulo zokuqhekezwa kunye nezohlwayo
Iimeko ezininzi zokuqhekeza azigqibi. Nangona kunjalo, isohlwayo sinokuba sikhulu ukuba ulwaphulo-mthetho luqinisekisiwe. Isenzo sokungena endlwini okanye kwindawo yokuhlala ukuze sibambe okanye senze elinye ityala siyabanjwa. Izityholo zinokuba nzima ukuba umtyholwa aphethe izixhobo okanye kukho umntu othile ekhaya. Ngokomthetho wase-Ohio, akukho mntu unokungena kwisakhiwo esihlala abantu nokuba sinyanzeliswa, ngasese, okanye ngenkohliso. Ukutyhola ngeenjongo zolwaphulo-mthetho kuya kohlwaywa xa omnye umntu elapho okanye kulindeleke ukuba abe lapho endlwini.
Iba lityala lesibini kwinqanaba lokuphoswa, elinokufumana isigwebo seminyaka emi-2 ukuya kwesi-8 kwaye ukuya kuthi ga kwi-15,000 yeedola.
Isigwebo sokungakhathali sibandakanya ukungena okanye ukuhlala kwipropathi yomnye ngaphandle kwelungelo. Izakhiwo ezenziweyo zibhekisa kumakhaya asisigxina kunye nawethutyana abantu. Kananjalo inokuba yinqwelomoya, ilori, inqwelo moya, kaloliwe, itreyila, intente, okanye indawo yokuhlala esebenza njengendawo yokuhlala, okanye yokuhlala ubusuku bonke abantu abakhona. Nangona kunjalo, ngexesha lokunxaxha, nokuba akukho bantu, isigama esihlala kuso sinokuhlala sisebenza.
Ushwankathelo olukhawulezileyo lokuqhekezwa kobugwenxa
Intlawulo yokuqala yenqanaba lokuqala yenza ulwaphulo-mthetho olugqithisileyo. Olona hlobo lolwaphulo-mthetho olubi kakhulu. Kwiimeko ezinjalo, umntu kufuneka angqine ukuba ulwaphulo-mthetho lwenzekile kwisakhiwo esihleliyo xa kukho omnye umntu. Ukuba umrhanelwa ubangela ukonzakalisa omnye umntu, okanye uphethe umpu okanye umpu obulalayo, oko kuyindlela yokuqhekeza.
Xa ubekwa ityala ngalo naliphi na ityala lolwaphulo mthetho, ungazikhusela ngokubonisa ukuba unemvume efanelekileyo yokungena kule ndawo okanye ukuba ubungekho kwindawo eqhubeka ngalo ulwaphulo-mthetho. Zininzi nezinye iindlela ezinokubakho. Kuba ukugwetywa ulwaphulo-mthetho lokugqekeza kungonakalisa ubomi bakho bonke, kuya kufuneka ulwele ukungabi natyala kwakho. Nangona kunjalo, ngaphambi koko, kuya kufuneka ukhulule ejele ngebheyile. Kwezi meko, isixa sebheyile sidla ngokubiza kakhulu. Ke, intlawulo inokuba yingxaki. Kodwa ungawusombulula lo mbandela ngokuqesha iarhente yebheyile kwi-Dayton.
exhonyiweyo Umthetho wepropathi | Ushiye uluvo |
ezaposwa ngomhla Novemba 6, 2019 by okwenyaniWW
Gqi beliswa: I-Nov 6, 2019 15: 17
Kutheni le nto iiConds zingumbandela ngoku?
Ukhe wacinga ngokuhamba kwi-condo emva kokubona umbono omtsha womzi-mibini wokulala kumzi wakho? Udinga ulwazi ngakumbi ngaphambi kokwenza isigqibo esikhulu kangaka. "Kutheni le nto izinto zangoku?"
Ukuthengisa iiNdawo zeeCondoms:
I-condos zanamhlanje zibalasele ngakumbi kunobubanzi besikwere obude kunendawo eqhelekileyo ye-condo endala. I-condos zanamhlanje zilikhaya elitsha losapho elinabathengi kunye nabaqeshi abafuna indawo yokulala enendawo ezintathu.
Umgangatho kwiifestile zophahla ezijonge ngaphezulu kwesibhakabhaka sedolophu kulapho ufuna ukuba khona njengoko usiphunga iglasi ye wayini kwaye ubukele ukutshona kwelanga. Kunye nesithuba esikule mihla, abahlali beCoo banqwenela ukuba nembono-into engakhange inikezwe nge-condos ezindala.
Abakhi babandakanya izinto ezilula ezinje ngokuhamba ngomgaqo, iindawo zokudlala zabantwana, iindawo zekomishini, kunye negadi ukuze abanini bayo bazonwabele. Kwenziwe iicondos zokwanela iintsapho ezinokubekwa ngendlela enkulu. Ezinye zezicwangciso zomgangatho zingabandakanya ikota nganye ukulungiselela indawo yokuhlala umanin, umkhwekazi, okanye iindwendwe.
Ezinye ii-condos zakhiwa ngokweemfuno zomthengi. Ziyakhiwa kwakhona ukuze zikwazi ukumelana neemeko zemozulu ezinje ngeenkanyamba okanye izaqhwithi.
Njengomthengi, ngaba unayo uyilo ekhitshini engqondweni yindawo yakho entsha? Ukuthetha nekhontraktha ngombono wakho kunokukuhlalisa ekhitshini lamaphupha akho. Kwezinye iintsapho, ikhitshi yindawo ekugxilwe kuyo kwaye yakhiwe ukuze ilungele iimfuno zolonwabo, zokuphumla kunye nezinye.
Enye yeendlela eziphambili zokuziphatha okutsha yi ikhitshi elingafanelekanga, ngokweMithombo eNtsha yeKhaya. Ngokufuna ikhaya elicekeceke kunye nelanamhlanje, abaqeshisi kunye nabathengi bafuna ikhitshi ngezinto ezifihliweyo, iziqithi ezikwindawo ephakathi, kunye neshelf evulekileyo.
Abathengi kunye nabaqeshi bafuna ukuya kuthi ga ngoku, ikhaya langoku elinemibala eqhelekileyo, imigangatho kunye nophahla. Ewe, isakhelo esenziwe ngokwezifiso. Iintsuku zihambile apho indawo ingaphezulu ichithwe khona. Uphahla lwakho ngoku lunokuza neziqholo, imibala kunye nemibala yesiko.
Ngaba ungumsebenzi okude kwaye ufuna iofisi ekhaya? I-condos ezintsha zakhiwa ngetekhnoloji ye-smart-home. Mhlawumbi kuya kufuneka uphume endlwini ngelixa usebenza. Abathengi bajonga ii-condos ezibonelela amaziko oluntu nge-WiFi okanye indawo yokubambisana.
Ngokuthandwa kwe-condos ekhulayo, kunjalo ke nemfuno ye-eco-friendly materials ekwakhiweni kwala makhaya. Ezinye zeendlela ezithandekayo zokwakha ii-condos ziluhlaza ngokukhanya, izixhobo zombane, kunye nepeyinti esetyenzisiweyo.
Iibhulebhu zezibane ze-LED zifakelwe kunye nezinto zombane ze-Energy Star kwi-greener condos. Elinye icandelo lokuphila eliluhlaza kwi-condos kukusetyenziswa komgangatho ngaphandle kokuncamathela. Umbhalo we bamboo yenye yezinto ezidumileyo zokuhlala ziluhlaza.
Iigadi eziphahla uphahla loluntu Bathandwa kukuphila okuluhlaza-eluphahleni lwendlu bencedisa ukufakela uphahla phakathi kweenyanga ezibandayo. Iipateni zegadi zipholisa umoya ngeenyanga ezishushu.
Abakhi basebenzisa ukufudumeza okuphezulu, ukupholisa kunye ne-ventil kwi-condos. Iimpompo zokugeleza okuncinci kunye nezindlu zangasese ziyanceda ekusebenzeni kwamandla. Iindonga zekhaya zi-eco-friendly, zisebenzisa izixhobo ezenziwe ngomxholo ohlaziyiweyo.
Ungafumana zombini iiplani ezincinci nezikhulu zomgangatho. Ngaba uyidlala elingenanto elifuna igumbi lokuthunga kunye negumbi leendwendwe xa utyelelo lukagogo lusiya? Okanye ngaba usisibini esitshatileyo osandula ukuqala usapho? I-condos zosuku lwanamhlanje zinesakhiwo esifanelekileyo kwiimfuno zakho.
Amawaka-milenia angakumbi aba ngabanonopheli, kwaye njengothengi wekhaya wokuqala, bajonga ukuba ngumama ongumama ukuze alungele iimfuno zabazali. Izidingo zoluliwe ukusuka kwigumbi elincinci kwigumbi eliphantsi ukuya kwigumbi lokulala elinye.
Enye indawo enkulu yokuthengisa yomthengi wenkulungwane okanye yomqeshi yi-condo egxile kumzimba nasempilweni. Abahlali baseCondo baguqukela ezingqondweni, emzimbeni, nasempilweni yomphefumlo kufutshane nasekhaya. Ezinye zeendlela abazifumana ngayo ezi zibonelelo kukusebenzisa njengezinto zokuzivocavoca, igadi yefeng shui, kunye namagumbi eemisipha.
Indawo ngumyolelo xa uqeshisa okanye uthenga ikhonkco kubanini. Bafuna ikhaya lale mihla kufutshane nesikolo sabantwana babo, kufutshane nesibhedlele, okanye kufutshane nezithuthi zikawonkewonke.
Ukuziva koluntu kunye nokhuseleko kuphezulu kuluhlu lomqeshi okanye umthengi. Ukusa ikofu eluphahleni ophahla lwendlu kunye nommelwane wakho kuvakala ngathi yindebe yakho? Okanye uncumo oluvela kummelwane njengoko ungena kwindawo yenyusi. Ezi zindlela ezimbalwa uluntu lwase-condo lokuphila lubhenela kwabanye njengawe.
Abathengi abaninzi kunye nabaqeshi bajonge i-condo njengekhaya lokuqala losapho endaweni yomhlaba oqhelekileyo kunye nephakheji yasekhaya.
Condo vs Indlu:
Iicondos zixabisa-kwaye zingaphantsi kwendlu yokuthenga.
Ukulungiswa kwangaphandle kunye nokulungiswa ziingxaki zomnye umntu, ezilungele umntu oxakekileyo.
Abanini bezindlu nabaqeshisi kufuneka bahambe ngeendawo zoncedo, ngelixa i-condo inayo yonke imihlaba.
Awunayo eyakho okwangoku? Nazi iingcebiso ezimbalwa ekufuneka uzilandele njengomqeshisi.
Iingcebiso zokuqeshisa ngeCondo:
Dwelisa izinto ozifunayo kunye nezifunayo ekhayeni.
Dibana nomthengisi wakho malunga noluhlu lwakho.
Fumana ukuba yintoni uxanduva lomqeshi wakho xa kuthelekiswa noxanduva lomnini.
Ndwendwela idilesi ngaphezulu kwesinye kwaye ngamanye amaxesha ngamanye amaxesha. Indawo esingqongileyo iya kwahluka emva komsebenzi kunangaphambi komsebenzi okanye ngeempelaveki.
Xoxa malunga nerente yakho yenyanga oza kuyigubungela, kwaye wazi ezinye iimali zakho kunye nokuba yimalini.
Nokuba uyathenga okanye uyaqasha, Jonga ii-condos eziphambili kwindawo yakho. Nokuba yeyiphi na iminyaka okanye inqanaba lobomi okulo, kukho indlela yoyilo ye-condo eyenzeka phandle apho kuwe.
exhonyiweyo Ukuthengisa ngokuthengisa izindlu nomhlaba | ephawulweyo Izibonelelo zeCondo | Ushiye uluvo |
ezaposwa ngomhla Septemba 10, 2019 by okwenyaniWW
Gqi beliswa: Sep 10, 2019 11: 50
Iialamu eziBelwetting: Indlela yokuYila iibhedi zoMntwana wakho
Umntwana wakho kufuneka alale ngcono kwigumbi lakhe lokulala kunye nentuthuzelo elungileyo. Kwaye abo uyilungiselela ibhedi ngokulula nangokulula umntwana ngokweemfuno zakhe.
Iindlela zokuPhucula igumbi lakho lokulala ngomntwana wakho
Beka ibhedi yakho.
Hlaziya umsebenzi wakho wobugcisa.
Guqula ukuvalelwa kobugcisa obubanjwe buqiniswe abahluli bakho.
Ukusasaza abahluli bakho ngemisebenzi yobugcisa etyhidiweyo.
Lahla ifenitshala ongafunanga kuyikhathaza ngayo.
Bopha imitya yakho kwaye ubambe imaski yakho.
Dlala ujikeleze umbhede ojikeleze ngolu hlobo:
Fumana ikhaphethi kwaye ungayijongeli phantsi imigangatho yakho.
Fumana imihlobiso yokwenyani yefestile okanye uxhome iidrophini zangoku eziphezulu.
Nika izambatho zakho zokucoca indawo kwigumbi lakho lokugcina okanye elinxiba.
Bandakanya ezinye izinto ezenziwe ngasemva okanye i-shading accents kwindlela yakho yokungena kunye nezinye iimpahla.
Bandakanya ukuphosa iflakisi yokuchukumisa ngokugqithileyo.
Lungisa ngokunyanisekileyo ukulungisa zonke iinkcukacha zeerekhodi zakho ezisasaziweyo.
Shiya yonke indawo kwaye ucoce izixhobo zakho.
Nyusa inani elikhulu lefanitshala yakho kubahluleli.
Pakisha izinto zakho ezingaqhelekanga.
Fumana amashiti amatsha nangona kunjalo ngokubaluleke ngakumbi, hlamba ngokwenene amashiti akho.
Yiya ngamandla kwaye ukhawuleze kwi-cushion embellishing.
Ndicime isibane egumbini lokulala.
Lahla inkunkuma etafileni yakho nangaphantsi kwayo.
exhonyiweyo Ukuphucula iKhaya | ephawulweyo Ukutshixa ialam | Ushiye uluvo |
Page 1 of 5412345Okulandelayo >Last »